अर्पण किन भिलेन बने ? वर्षा कसरी गेम-चेन्जर ? (भिडियोसहित)
By Bisnu Sharma on	 23rd March 2017 अन्तर्वार्ता
‘लप्पन छप्पन’ शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । अभिनेता अर्पण थापा र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी प्रोजेक्टलाई लिएर आशावादी सुनिए । सिनेमामा अर्पण भिलेन र वर्षा ग्याङस्टरसहितकी लभरगर्ल छिन् ।
‘पशुपति प्रसाद’ फेम्ड एक्ट्रेस वर्षालाई पश्चिमा लुक्समा देख्न सकिन्छ जहाँ उनी एक्लो महिला पात्र हुन् । ‘अवश्य पनि नयाँ र च्यालेन्ज महसुस भैरहेको छ तर पशुपति प्रसादको कमब्याक अर्थमा दबाब महसुस गरिरहेकी छैन’ वर्षा सुनिइन् ।
अर्पण भर्सटाइल एक्टर हुन् पर्दामा । पात्रात्मक विविधतामा उनिन सक्नु उनको खुबी हो । मुकुन्द भट्ट निर्देशित ग्याङस्टर ड्रामामा उनी एन्टी हिरो छन् । के कारणले उनी भिलेन बन्न तयार भए ? ‘भिलेन हुँदा खुल्न सजिलो हुन्छ, बाउन्ड्री हुँदैन’ उनले भने ।
यी दुबैले पटकथालाई सिनेमाको सौन्दर्यको रुपमा व्याख्या गरे । फिल्ममा वर्षाले एक्सन दृश्य पस्किएकी छन्, सँगै प्रेमिल स्वरुप पनि । अर्पण सरल तर डरलाग्दा देखिन्छन् । सम्पादक विष्णु शर्मासँग उनीहरुको संक्षिप्त संवाद :